Dahlinyaro soomaaliyeed oo Tahriibayaal ah oo magafihii haystey Lacagtii markuu ka qaatey Meel Cidla ah uga dhaqaaqey.
Waxaa jira dhacdo xanuun badan oo ku saabsan Tahriibayaal soomali u badan oo magafayaashii haystay cidla uga dhaqaaqeen kadib makeey Qoyasaskoodii ka qaateen Lacagahii ay u haysteen.
Wararku waxeey intaas ku darayaan in 700 boqol oo qof oo dhalinyaro oo African ah oo somaali ubadan oo tahriibayaal oo somaali ubadan oo isugu jira Ethiopian iyo Eritrean ay dadkaasi yahiin Intooda badana laga qaatey lacag U dhaxaysa $2500—10.000 kuwaas oo looga tagay Goob qatar ah oo ah Duleedka magaalada tripoli ee dalka Liibiya.
Wararku waxeey sheegayaan in goobtaas ay aad uga ag dhow yahiin kooxaha jabhadaha Hubeysan iyo kooxda ISIS oo ay qatar ugu jiraan ineey dib u qafaashaan si ay u askareystaan.
Raasmedia .net waxaa Xiriir toos ah la sameeyey mid kamid ah Waalidiinta dhalay mid kamid ah Dhalinyaradaas soomaaliyeed oo u sheegay markuu mudo lagu haystey halkaas wiil uu dhalay aaqir lacagtii 10.000 ah markeey bixiyeen wiilkoodii iyo inti la socotay meel cidla ah oo saxaare ah looga dhuuntey ,Meel ay ugu hagaagaana aanay jirin ilaa 3 cisho ee ugu dambeysey markii ugu war dambeysana ay joogeen meel cidla ah oo magafayaashii uga dhaqaaqeen.
Sida la sheegay Tirada 700 oo dhalinyarada ah Soomaalidu Tiro ahaan waxeey Noqonaysaa Sedex duleel Labo Duleel da.doodu u dhaxayso 15–17 sano jir.
waxaanan rajeynaynaa Cid kasta oo awooda ineey dhacadadan gaarsiiyaan hayadaha caalamiga ah ee arimaha ku shaqada leh si laysugu dayo in la badbaadiyo dhalinyaradaas Dhibanayaasha ah Sida hayadaha UNCR iyo hayadaha u dooda Xuquuqda Bini,aadamka .
Waalidiintii dhalinyaradaasi kama qan tahayna waxaan u rajeynaynaa in ilaahay usoo badnbaadiyo.
Sawirkan waa mid kamid ah dhalinayarada soomaaliyeed oo mudada la haystey Cidlada iyo saxaarahana looga dhaqaaqay kadib markii Waalidkiis laga qaatey lacagtii loo haystey oo dhan 10,000 oo doller.illaahay waxaan ka barya ynaa inuu soo badbaadiyo isaga iyo inta la socotaba.